Nabad ilaaliyaha UN-ka oo ladilay, labo kalena agu dhaawacay weerar gaadmo ah oo lagu qaaday CAR | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nabad ilaaliyaha UN-ka oo ladilay, labo kalena agu dhaawacay weerar gaadmo ah...
Nabad ilaaliyaha UN-ka oo ladilay, labo kalena agu dhaawacay weerar gaadmo ah oo lagu qaaday CAR
Howlgalka Qaramada Midoobay ee dalka ayaa sheegaya in fallaagada ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen askarta howlgalka amniga ka waday Grimari.
Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay wuxuu si adag u cambaareeyay weerarada lagu qaaday ciidamadooda
Hal nabad ilaaliye ayaa lagu diley weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen fallaagada meel u dhow magaalada Grimari ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika (CAR) iyada oo rabshadaha dilaaga ah ay sii socdaan ka dib doorasho lagu murmay bishii hore.
Laba askari oo kale ayaa la dhaawacay markii dagaalyahano ka tirsan isbahaysiga kooxaha fallaagada ah ay laba weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalalka Burundi iyo Bangladesh, sidaana waxa lagu sheegay bayaan ay soo saartay xafiiska hawlgalka Qaramada Midoobay ee MINUSCA.
Jabhadda CAR ayaa weerartay magaaladana soo gashay kahor intaan lagu dhawaaqin natiijada codbixinta Madaxweynihii hore ee CAR Bozize oo ay ku socoto baaritaanka ‘kacdoonka’.
Nabad ilaaliyeyaashu waxay hawlgal amni ka wadeen agagaarka Grimari, oo 200km (120 mayl) waqooyi-bari kaga beegan caasimadda Bangui, ayay raacisay.
Nabadoonka reer Burundi ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo labaad, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay labo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee Bangaladesh intii ay socdeen weerarada isla markaana la daweynayay
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in weerarada “ay noqon karaan dambi dagaal” wuxuuna ku baaqay in kuwii ka dambeeyay falkaasi sharciga la horkeeno, afhayeenka Qaramada Midoobay Stephane Dujarric ayaa yiri.
Madaxa qaramada midoobay ayaa sidoo kale ku celiyey “welwelka qotada dheer ee uu ka qabo sii socoshada dadaalada xasilooni darada ee ay wadaan kooxaha hubaysan ee wadanka oo dhan”, wuxuuna ugu yeeray dhamaan dhinacyada “si deg deg ah in ay joojiyaan rabshadaha isla markaana ay ku xaliyaan khilaafaadkooda qaab nabadeed”.
Korodhka ba’an ee rabshadaha toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ku qasbay in ka badan 60,000 oo qof inay ka qaxaan dalka, iyagoo magan galyo u raadinaya Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyo waddamada kale ee deriska ah, sida ay sheegtay hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR).
DR Congo waxay qaabishay tirada ugu badan ee qaxootiga – ilaa 50,000 tan iyo bishii Diseembar, oo ay ku jiraan 10,000 oo yimid Arbacadii markii isbahaysiga mucaaradka ay weeraro ka geysteen duleedka caasimada, sida ay sheegtay UNHCR.
Si kastaba ha noqotee, Cameroon waxay sidoo kale aragtay kororka tirada qoysaska, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, oo ka imanaya Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, ayay raacisay.
“Bilowgii markii ay soo galeen, waxay dhaheen wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq ka hortag ah, way baqayeen maxaa yeelay waxay xasuusteen rabshadihii ay la kulmeen 2013,” ayay tiri Helen Ngoh Ada, afhayeenka hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee Cameroon.
“Muddooyinkii dambe, kuwa imanayay waxay dhahayeen inay asal ahaan naxdin la yimaadeen, waxayna la kulmeen nooc ka mid ah xadgudubyada, xadgudubyada xuquuqda aadanaha, waana sababta ay u carareen,” ayay ku tiri wareysi ay la yeelatay Associated Press.
Dadka waxaa loo oggol yahay inay ka gudbaan CAR una sii gudbaan Cameroon, laakiin xuduudaha ayaa u xiran ganacsatada iyo gawaarida waaweyn iyo sahaydu ma soo gelin Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika dhowr maalmood, ayuu yiri Ngoh Ada.
“Waxay ka dhigan tahay in hab-nololeedka dadka ku nool Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay khatar ku jirto, taasina waxay noqon doontaa mid ka mid ah sababaha ay dadku ugu sii gudbayaan Cameroon,” ayay raacisay.
Arbacadii, ciidamada amniga ayaa ka hortagay weerarada mucaaradka ee isku dayaya inay qabsadaan Bangui ka dib dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada markii ay sii kordhayeen rabshadaha gilgilay dalka tan iyo bishii hore.
Ugu yaraan hal askari oo Ruwanda ah oo nabad ilaalin ah ayaa dhintay mid kalena waa dhaawacmay, UN-ka ayaa sidaas yidhi. Raiisel wasaaraha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Firmin Ngrebada, wuxuu sheegay in ugu yaraan 30 fallaago ay sidoo kale dhinteen.
Mucaaradka ayaa ka dhiidhinaya dib u doorashadii 27-kii Disembar ee madaxweyne Faustin-Archange Touadera. Ka dib markii lagu dhawaaqay 4tii Janaayo ee guusha Touadera, isbahaysiga mucaaradka ayaa ku hanjabay inay qabsanayaan caasimadda. Waxay sidoo kale la wareegeen magaalooyin ku yaal qeybaha kale ee dalka ka hor codeynta.
Ciidanka ayaa waxaa ku gacan siiya dagaalka ay kula jiraan fallaagada xoogag ka socda Rwanda, Russia, France iyo Qaramada Midoobay.
Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee hodanka ku ah macdanta ayaa la kulantay dagaallo diimeed iyo kuwo beeleed oo lagu hoobtay tan iyo 2013, markii fallaagada Seleka oo u badan Muslimiin ay xukunka kala wareegeen madaxweynihii hore Francois Bozize kadib markii ay muddo dheer sheeganayeen in la fogeeyay.
U adkaysiga xukunka Seleka ayaa aakhirkii horseeday in muslimiinta la bartilmaameedsado si wada jir ah, iyadoo qaarkood la garaacay oo la dilay, masaajiddo la burburiyey iyo tobanaan kun oo laga raray caasimadda 2014.
Bozize ayaa lagu eedeeyay inuu huriyay rabshadaha todobaadyadii la soo dhaafay, kaasoo qarxay kadib markii maxkamada dastuurka ay diiday musharaxnimadiisa bishii December.
Previous articleUN peacekeeper killed, two others wounded in CAR ambush
Next articleMajor security partners: US hails Bahrain, UAE after Israel deal
War ka soo baxay Ururka Al -Shabaab ayaa lagu beeniyay warkii taliyaha ciidanka dhulka ee Soomaaliya ee ahaa in Milatariga Soomaaliya ay dhawr iyo...
Qoor Qoor oo laga Dapbaday in uu soo gudbiyo Liiska...
Gudoomiyaha golaha wakiillada Jubaland oo magacaabay guddiga doorashada xubnaha u...